Booliska Hirshabelle oo dad u soo qabqabtay dilkii Wasiirka Beeraha iyo qarax ka dhacay Beledweyne - Jowhar Somali news Leader
Home News Booliska Hirshabelle oo dad u soo qabqabtay dilkii Wasiirka Beeraha iyo qarax...
Booliska Hirshabelle oo dad u soo qabqabtay dilkii Wasiirka Beeraha iyo qarax ka dhacay Beledweyne
Ciidamada Booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dilkii wasiirkii beeraha Hirshabelle Cabdqaadir Karaani ku soo qabtay howlgal ay ka sameeyeen magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.
Dadkan lagu tuhunsan yahay dilkii habeen hore loogu geystey wasiirkii Beeraha Hirshabelle magaalada Jowhar ayaa waxaa ka mid ah wakiil wareedka taleefishinka Dalsan Maxamed Deeq Alfa iyo dad kale.
Booliska ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dadka loo soo qabtay dilka Wasiirkii beeraha Hirshabelle oo lagu aasay shalay qabuuro ku yaal deegaanka Banaaney ee duleedka magaalada Jowhar.
Dhinaca Booliska gobolka Hiiraan ayaa howlgal ay sameeyeen waxaa ay ku soo qabteen dad lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen qarax khasaaro geystay oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Beledweyne .
Guddoomiye ku xigeenka Siyaasadda iyo Maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cali Maadeey ayaa sheegay in ay wadaan howlgallo lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay qaraxa, wuxuuna xusay in ay gacanta ku soo dhigeen dad looga shakisanyahay in ay ka dambeeyeen qaraxa, baaritaana ay ku wadaan.
Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa la dhigay afaafka hore ee garoonka kubbada cagta Laqanyo, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday saddex askari oo ka tirsan Booliska Hir-Shabeelle.
CCW “Tanaasulka Madaxweynaha haddii dhab ka tahay Taliska Nabadsugida ha bedelo”
Madaxweynaha Jubbaland oo la kulmay hoggaanka Ururada Bulshada Rayidka